အဆီဖုသမားလေးတွေအတွက် Cosrx ရဲ့ One step clear pad လေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » အဆီဖုသမားလေးတွေအတွက် Cosrx ရဲ့ One step clear pad လေး
သွားစရာရှိခါမှ ဝက်ခြံတွေထွက်နေလို့ အဆီဖုတွေထွက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူလေးတွေရှိလား? ဝက်ခြံတွေကို မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာ ပျောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အချစ်တို့ကို သတင်းကောင်းလေးပါးချင်လို့လေ။ ဘာလေးလဲဆိုတော့ ညဘက်မှဝက်ခြံတွေပေါ်ကို ကပ်လိုက်တာနဲ့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ချပ်ပြီးတော့ သက်သာသွားစေမယ့် ပစ္စည်းကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါနော်။
သူလေးကတော့ korea brand လေးဖြစ်တဲ့ cosrx လေးပါ။ လတ်တလော ကောင်မလေးတိုင်းလိုလိုရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့ brand လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ သူကသုံးပြီးတာနဲ့ နှစ်ပါတ်မှာ သိသာတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကိုပေးလို့ အသည်းစွဲဖြစ်နေကြတာပါနော်။ သူကတော့ toner, emuision, essence, cream အစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားအများကြီးထုတ်ထားပြီးတော့ တကယ်လည်းပေးရတဲ့စျေးနဲတန်ပါတယ်နော်။ အဆီဖုတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးဖြစ်လို့ ဝက်ခြံသမားတွေ အဆီဖုသမားတွေကတော့ သူမှသူပဲဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့။
အခုပြောပြပေးမှာလေးကတော့ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ Cosrx One step Original clear pad လေးတွေအကြောင်းပါ။ အဆီပြန်တဲ့အသားရေပိုင်ရှင်လေးတွေကတော့ စိတ်ညစ်ကြတာပဲလေ။ အဆီဖုတွေထွက် ဒီကြားထဲ ဝက်ခြံလေးတွေကလည်း စစ်ကူထွက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ပျောက်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ စိတ်ညစ်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီ clear pad လေးတွေကတော့ ပလပ်စတစ်ဘူးကြီးထဲမှာ cotton pad လေးတွေကို အထပ်ထပ်ထပ်ထားပြီးတော့ toner အရည်လေးတွေလည်း ပါပြီးသားဆိုတော့ဘာလိုသေးလဲ။ အဆင်သင့်လေးထုတ်သုံးပေးရုံပဲလေ။ Cotton pad တွေ ထပ်သုံးစရာမလိုတော့ အလုပ်လည်းမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့။ အသဲတို့ပျင်းကြတယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ ဟိဟိစတာပါ?
ဒီ pad လေးတွေကို toner အနေနဲ့သုံးပေးရတာပါ။ မိတ်ကပ်ဖျက်သလိုသုံးရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ သုံးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ဘူး တစ်ဘူးမှာ အချပ်ရေ ၇၀ ပါတာမို့ တစ်နေ့တစ်ခုနဲ့ သုံးရင်တောင်နှစ်လနီးပါးလောက်သုံးလို့ရတော့ ok တာပေါ့။ Cotton pad ကလည်း တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အသားမတူပါဘူး။ တစ်ဖက်က ချောချောလေးဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ဖက်ကတော့ အဖုလေးတွေနဲ့ပါ။ အဖုလေးတွေဘက်ကို အရင်ဆုံးသုံးပေးလိုက်ရမှာပါ။ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ cleanser နဲ့သစ်ပြီးတော့ကျန်နေသေးတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ပါသန့်စင်စေတာပေါ့။ အဆီဖုလေးတွေရှိတဲ့နေရာကို ပိုသုံးပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ပြောင်ချောနေတဲ့ဘက်လေးနဲ့ လိုက်သုတ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ မျက်နှာလေးကို ၂ ခါသန့်စင်ပြီးသားဖြစ်သွားစေတာပေါ့။
ခရီးသွားရင်တော့ အဆင်ပြေပေမယ့် ဘူးကနည်းနည်းလေးကြီးနေပါတယ်။ cotton pad လေးတွေကလည်း ပုံမှန်ထက်ကြီးနေလို့ နှစ်ခြမ်းညှပ်သုံးရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နော်။ အဲ့တော့ အချပ် ၁၄၀ ဖြစ်သွားတော့ budget ဖြစ်ပြီလေ။ အကြံပိုင်ချက်
စျေးနှုန်းကတော့ အချပ်ရေ ၇၀ ပါတဲ့ တစ်ဘူးကို ၂၂၀၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ စျေးကတော့ အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
အဆီဖုထွက်တဲ့သူလေးတွေ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ကြဉီးနော်။ နောက်ထပ်လည်း cosrx ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးဉီးမှာမို့ cosmeticmyanmar page လေးကို like လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ဉီးနော်။
Tags: aceneclear padcosrx